Difaaca Barcelona ee Jordi Alba oo looga gacan haatinayo Premier League iyadoo ay dooneyso mid ka mid ah kooxaha LIXDA waaweyn – Gool FM
(England) 21 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la aaminsan yahay inay iska iibin karto difaaceeda bidix ee Jordi Alba kaasoo ka mid ah xiddigaha ugu mushaharka sarreeya Camp Nou.
Difaaca khibradda sarreeya ayaa bartilmaameed u ah kooxda Manchester United taasoo dooneysa inay dambeedka bidix kusoo kordhiso waaya-arag tayo sare leh sida laga soo xigtay El Nacional.
Wargeyska kasoo baxa Catalonia ayaa intaas ku daray inuusan fahansaneyn sababta ay Red Devils haatan u dooneyso saxiixa Alba iyadoo heysata Luke Shaw oo bandhig heer sare ah ku jira, sidoo kalena uu keyd fiican u yahay Alex Telles xilli 32-sano jirka reer Spain uu madaxa la galay waayihii ugu dambeeyay xirfaddiisa kubadda cagta.
Si kastaba ha ahaatee, warsidahan ayaa intaas raaciyay inay Blaugrana la tacaaleyso dhibaato dhanka mushahar bixinta ah taasna ay ku qasbeyso inay iska fasaxdo xiddigaha jeebka ku rita mushaharaadka badan sida Alba oo kale, waxayna baddel ahaan diiradda saareysa soo qaadashada kabtanka naadiga Valencia ee Jose Gaya si ay toos uga taqallusto kabtankeeda afaraad.
Real Madrid oo qarka u saaran inay lumiso loollanka Erling Haaland... (Maxay tahay sababta?)